C/rashiid Xidig oo ku biiray xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda soo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/rashiid Xidig oo ku biiray xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda soo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ahaa musharixiintii dhawaan ku guul-dareystay tartankii doorasho ee gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu haatan heysto isbaheysi xildhibaano oo ku dhisan kuwa isbadel doon ah.
Xildhibaan Xidig ayaa sheegay in xildhibaanada uu haatan haysto ay gaarayaan tiro ahaan illaa 99 xildhibaan, kuwaas oo ku sheegay inay yihiin kuwo ku dhisan in isbedel dalka laga sameeyo, si wixii hore u dhacay loo saxo.
Dhinaca kale, xildhibaanka ayaa sheegay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka dhacay isbedel, taasoo aan la ogeyn waxa uu kala jeeday, maadaama dib loo doortay labo ka mid ah madaxdii hore uga tirsanayd baarlamaanka.
Hadalka kasoo yeeray xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig ayaa u muuqda mid uu si weyn kaga soo horjeedo in markale dib loo soo doorto madaxweynaha haatan taladda haya ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyn, C/rashiid Maxamed Xidig ayaa haatan la sheegayaa inuu ku biiray kooxaha sida weyn uga soo horjeeda soo laabshada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona dhinaca kale u muuqda mid taageeraya musharixiinta madaxweyne ee kasoo jeeda beesha Daarood.